Dadka reer Algeria oo maanta u codeynaya doorashooyinka baaralamaanka ,kaddib kacaankii guga carabta. – Radio Daljir
Dadka reer Algeria oo maanta u codeynaya doorashooyinka baaralamaanka ,kaddib kacaankii guga carabta.
Aljeria, May 10 – Dadka wadanka Algeria ee waqooyiga qaarada Africa ayaa maanta oo khamiis ah u codeynaya doorashooyinka baarlamaaniga ah ee dalkaasi ,laakiin aaminaad-darrada ka imanaysa balanqaadyadii hore ee dowladda oo aan la fulin ayaa ka qaybgalka doorashadaasi ka dhigikara mid hooseeya.
Cod-bixiyayaasha Algeria ayaa codkooda dhiibanaya si’ay u soo doortaan xubnaha baarlamnaka oo gaadhaya 462 ,waxaana doorashada sanadkan ka qaybgelaya axsaab tira badan.
Bishii April ee sanadkii madaxweyne C/casiis Bootafliiqa ayaa ku dhawaaqay isbedel dhinac dastuurka ah , waxana arrintaasi ay qayb ka ahayd dadaal uu ku doonayey in uu ku dejiyo mudaharaadyo dimuquraadiyad-doon ahaa oo dalkaasi ka curtay sanadkii hore.
Dowladda Algeria ayaa balanqaaday in ay qabanayso doorashooyin xor ah oo hufan , inkastoo shaki ay ka muujinayaan dhinacyada mucaaradku.
Maamulayaasha Algeria ayaa markii ugu horreysay ogolaaday kormeerayaal caalami ah ,waxana arrintani ay qayb ka tahay taabagelinta Dimuquraadiyadda, sida ay sheegtay dowladda Algeria.
Inkastoo ay sidaasi tahay hadana dhalinyarada wadanka Algeria oo ugu badan dadka wadankaasi ayaa iyagu qaadacaya doorashada, waxana ay ka cabanayaan in dowladdu ay wax gacan-bidixayneyso.
Dadka wax taxliiliya ayaa sheegaya in doorashada maanta oo khamiis ah ka dhacaysa dalkaasi Algeria loo badinayo inay ku guuleystaan axsaabta islaamiga ah, sida ka dhacday dalalka Morocco, Tunisia iyo Masar.